၎င်းတို့၏ ကျွမ်းကျင်မှု၊ တတ်ကျွမ်းမှုတို့ဖြင့် BDMS Wellness Clinc ရှိ ဆေးပညာရှင် အဖွဲ့မှာ ကိုယ်ဝန်မရရှိခြင်း၏ နောက်ကွယ်တွင်ရှိနေသော အကြောင်းအရာများကို ရှာဖွေခြင်းမှတစ်ဆင့်၊ လူနာအနေဖြင့် ကလေးယူရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေစေရန်အတွက် ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းများမှ တစ်ဆင့် အဖြစ်နိုင်ဆုံးသော၊ ပြီးပြည့်စုံမှုအရှိဆုံးသော ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးရန်ကြိုးစားနေကြပါသည်။
“Specialist in Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Medicine”
Poonsak Waikwamdee, M.D., သည် သူ၏ ဆေးပညာဆိုင်ရာ M.D. ဘွဲ့ကို ထိုင်းနိုင်ငံ Chulalongkorn Universityရှိ the Faculty of Medicineမှ ရရှိခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် တက္ကသိုလ်ရှိ သားဖွာ၊ မီးယပ်ဌာနတွင် ဆက်လက် လေ့လာခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အင်္ဂလန်နိုင်ငံတွင် Diploma in Assisted Reproduction ဒီပလိုမာ ဘွဲ့ကို ရယူခဲ့ပြီး ဂျာမနီနိုင်ငံရှိSurgical Pelviscopy တွင် အလုပ်သင်ဆင်းကာ လေ့ကျင့်သင်ယူခဲ့ပါသည်။
အတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်း ၃၀ ကျော်ရှိသော Poonsak သည် Surgical Pelviscopy တွင် များစွာ ကျွမ်းကျင်ပါသည်။ အန္တရာယ်များသော ကိုယ်ဝန်များ စောင့်ရှောက်ခြင်း၊ အထူးသဖြင့် IVFနည်းလမ်းနှင့် မျိုးဗီဇရောဂါများ ကြိုတင်စစ်ဆေးခြင်းတို့ကို အသုံးပြုလျက် ကိုယ်ဝန်မရသည့် ပြဿနာကို ကုသရာတွင် များစွာ ကျွမ်းကျင်မှု ရှိပါသည်။ သူသည် ဇနီးမောင်နှံထောင်ပေါင်းများစွာ၏ မိသားစုဘဝတည်ဆောက်ရေး အိပ်မက်ကို ကူညီအကောင်အထည်ဖော်ပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
Assisted Human Reproduction, UK
Diploma in Surgical Pelviscopy, Kiel, Germany
Diploma of the Thai Board of Obstetrics and Gynecology, Thailand
Diploma of the Thai Subboard of Reproductive Medicine, Thailand
OB/GYN (Women), Reproductive Medicine and Endocrinology
Assisted reproduction (IUI,IVF,ICSI, GIFT, ZIFT,PESA,TESE)
Micromanipulation and Preimplantation Genetic Diagnosis(PGD)
Recurrent pregnancy loss and High risk pregnancy
Laparoscopic surgery for infertility, ovarian cyst, fibroid
Endoscopic surgery for infertility, ovarian cyst, fibroid
Sorapop Kiatpongsan, M.D., Ph.D. သည် သူ ၏ M.D. ဘွဲ့ကို Chulalongkorn University တက္ကသိုလ်ရှိ the Faculty of Medicine မှ ရရှိခဲ့ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံ Harvard University တွင် ဆက်လက်ပညာသင်ကြားခဲ့ပါသည်။
Sorapop Kiatpongsan, M.D., Ph.D. သည် assisted reproduction technology တွင် အထူးပြုလေ့လာသင်ကြား ကုသပါသည်။ ထိုနယ်ပယ်တွင် အတွေ့အကြုံများစွာရှိပြီး ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းတွင်ရော ထိုင်းနိင်ငံပြင်ပတွင်ပါ ခေတ်မီနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအပါအဝင် မျိုးပွားရေးနည်းပညာများအတွက် အကြံပေးလည်းဖြစ်ပါသည်။ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်အတွေ့အကြုံရှိသော ၎င်းသည် ကလေးမရနိုင်ခြင်းအတွက် ကုသမခြင်း၊ ကလေးမယူမီ ကုသခြင်း၊ ကလေးယူရေးအစီအမံချရေးတွင် ကျွမ်းကျင်ပါသည်။
M.D. (1st class honors), Chulalongkorn University
Doctor of Philosophy (Ph.D.), Harvard University, Unites State
Reproductive Biology, Stem Cell Biology and Regenerative Medicine, Harvard Medical School, United State
Reproductive Endocrinology and Infertility, Harvard Medical School, United State
Preparation before marriage and before having children